Tag: fitantanana media sosialy | Martech Zone
Tag: fitantanana media sosialy
Ny orinasam-pandraharahana dia manana fanamby maro izay mitaky ny famokarany ny vokariny amin'ny fomba hafa. Ny rindranasan'ny orinasa dia manana andraikitra, fahazoan-dàlana, fanaovana tatitra ary alàlan'ny asa an-trano, mety mitaky làlan-kaonty amin'ny indostrian'ny fahasalamana sy ara-bola izy ireo, ary tsy maintsy refesina arakaraka ny tokony ho izy. Ao anatin'ny haino aman-jery sosialy, fanamby faran'izay sarotra izany noho ny fanamby goavana sy ny sehatra maro azo. Altimeter dia nametraka an'i Sprinklr ho afaka manome fahafaham-po ny filan'ny orinasa lehibe. Ny Econsultancy dia manome ny laharana Sprinklr ny orinasa avo indrindra